मनसुन सक्रिय भएयता विपदमा परेर २ सय जनाको ज्यान गयो | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
५४ जना अझै बेपत्ता
साउन २३, २०७७ शुक्रबार १४:४:४१ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ – यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएयता अहिलेसम्म विभिन्न विपद्मा परेर दुई सय जनाको ज्यान गएको छ । नेपाल जेठ ३० गतेदेखि मनसुन सुरु भएकाे हाे ।
पहिरोमा परेर एक सय ७६, बाढीमा परेर पाँच र चट्याङ लागेर १९ जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । विपदमा परेर ५४ जना अझै हराइरहेका छन् भने एक सय ९० जना घाइते भएका छन् ।
यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्का १० वटा घटना भएका छन् । घटनामा परि चार जनाको ज्यान गएको छ भने ३८ लाख ५७ हजार रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको छ ।
झापाको कमल गाउँपालिका ५ मा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । हात्तीले घरसमेत भत्काएको छ ।
यसैबीच सिरहाको गोलबजार नगरपालिका २ मा धुपबाट आगलागी हुँदा स्टेसनरी पसल नष्ट भएको छ भने सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका १० मा विद्युत् शर्ट भइ आगलागी हुँदा घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।
यता पहिरोका कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिका ३ मा पर्ने बेनी मालढुङ्गा सडकखण्ड बन्द भएको छ ।
Aug. 7, 2020, 4:25 p.m.
होइन यो प्राधिकरण को गठन चाही आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन मात्र गरेको रेछ ? कुनै काम त गरेको देखिदैन त । सबै बिपद ब्यबस्थापन सुरक्षा कर्मिले फुको चाउ चाउ चिउरा खाएर ज्यान छोडेर गर्छन यिनिहरु करोडौ खाएर गरेको काम चाही यही सुचना हो ? त्यो पनि अर्काले त्यार गरेर समाचार मा आइसके पछी आएको छ । यो कुन पार्टिको कुन नेताको गुट को भ्रात्री संठन रेछ ?